Epic ကျောက်မျက်ရတနာ | Coinfalls ကာစီနို
ဒီသွားသောကဒ်ဂိမ်းနဲ့အတူ, ကစားသမားကို click ဖြစ်ကြောင်း 40 သူတို့အိမ်တွင် screen ပေါ်မှာမြင်သောကျောက်မျက်. သင်ကစား button ကို click နှိပ်ပြီးတာနဲ့, သငျသညျအသီးအသီးအဘို့အကစားသမားတွေရှိပါတယ်အဘယ်အရာကိုမြင်မှကျောက်မျက်အသီးအသီးကို click ဖြစ်ကြောင်း. ရှိပါတယ်4ထိုကျောက်မျက်အတွက်ကျပန်း hidden ဖြစ်ကြောင်းမိုင်း; ကစားသမားတွေသူတို့အပေါ်မှာကလစ်နှိပ်လျှင်ဂိမ်းချက်ချင်းအဆုံးသတ်မှကြွလာ. သို့သော်ငြားလည်း, ကစားသမားကို click လျှင် 36 ထို့နောက်မိုင်းပေါ်ကစားသမားကိုနှိပ်ခြင်းမရှိဘဲကျောက်မျက်ကိုအနိုင်ပေးရလိမျ့မညျ.
ဒီဂိမ်းရဲ့အဓိကဂိမ်းသငျသညျကိုကလစ်နှိပ်ပါသောကျောက်မျက်အပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာသင့်ရဲ့ကံအပေါ်မူတည်ကြောင်းအခွင့်အလမ်းကိုအခြေခံပြီးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အဂိမ်းကိုအဆုံးသတ်နိုင်သောသူအချို့ရှိဖြစ်ကြသည်ခြောသငျသညျအစွမ်းကုန်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူတိုင်းစိန်ကို click လုပ်. ရှိပါတယ် 40 မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိကျောက်မျက်နှင့် player ကျောက်မျက်က Epic ကျောက်မျက်ရတနာသွားသောကဒ်ဂိမ်းထဲမှာသူတို့အဘို့အရှိပါတယ်အဘယ်အရာကိုမြင်မှအသီးအသီးကို click ပါတယ်.
Epic ကျောက်မျက်ရတနာ၏ developer များအကြောင်း
Epic ကျောက်မျက်ရတနာအ iGaming စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ဂိမ်း developer များထဲကတစ်ခုဖြစ်သည့် Gamevy ကတီထွင်ခဲ့, သူတို့ရဲ့အရည်အသွေးနှင့်အတူဂိမ်းဖန်တီးခံစားကစားသမားများအတွက်အရည်အသွေးလောင်းကစားရုံဂိမ်းဖန်တီးနေတဲ့လိုင်စင်ရကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းများမှာ.
ဂိမ်းမစတင်မီ, ပထမဦးဆုံးကစားသမားသည်မိမိလောင်းရန်လိုအပ်သည်. ကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိအဆိုပါလောင်းကစားအရွယ်အစားဤအရပ်ကစားသမားပညာရှိရှိကိုအကောင်းဆုံးပမာဏကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အနိုင်ရရှိပမာဏကိုဆုံးဖြတ်.
မျက်နှာပြင်တွင်, ထီပေါက်ငွေပမာဏကိုပြသပါလိမ့်မည်, ကထီပေါက်ငွေပမာဏကိုကစားသမားကသူထားသောအလောင်းအစားနှင့်အတူအနိုင်ရနိုင်ငွေပမာဏသည်
ရှိပါတယ် 40 ကစားသမားနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိကြောင်းကျောက်မျက်နှင့်4မိုင်း.
ဒီသွားသောကဒ်ဂိမ်းထဲမှာ, ကစားသမားအချိန်မရွေးမိမိအအနိုင်ရရှိထွက်ငွေသားရန် option ရှိပါတယ်. ဒါဟာကစားသမားတွေပိုပြီးအနိုင်ရဘို့တစ်ချက်ချင်းအနိုင်ရရှိဂိမ်း features တစ်ခုစိတ်ဝင်စားစရာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်.
Coinfalls ကာစီနိုမှာ Epic ကျောက်မျက်ရတနာသို့ delve နှင့်ဤကာစီနိုဂိမ်းသင်တို့အဘို့အဘယ်အရာကိုမြင်ရှိပါတယ်. ယနေ့ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ဤကာစီနိုဂိမ်းကစား!